Fiangonana FJKM “Aza avela hiteraka fanavakavahana ny loko politika”
150 taona FJKM Imerinkasinina Notokanana omaly ny valintafo sy « orgue » ho tsangambato
Tontosa omaly ny famaranana ny jobily faha-150 taonan’ny FJKM Imerinkasinina. Nanamarika ity fanompoam-pivavahana ity ny fitokanana ny valintafo sy ny « orgue », izay tsangambaton’ny faha-150 taona.
Raharaha Fiangonana METM Hiakatra fampanoavana anio
Miakatra fampanoavana anio etsy amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy ny Pasitera ao amin’ny fiangonana FMKA Antohomadinika na Fiangonana mahaleotena karmela Ankorondrano, sampana Antohomadinika.
Hetsika ara-panatanjahantena AFIFAB Raikitra ny fiadiana ny “Amboaran’ny filohan’ny FJKM”
Eny amin’ny kianjan’ny sekoly Paul Minault Androhibe, nanomboka tamin’ny sabotsy 02 novambra 2019 teo ka tsy hifarana raha tsy amin’ny faha-20 novambra ho avy izao, no hanatontosana ny hetsika ara-panatanjahantena
COHEN BERA Nindaosin’ny fahafatesana ny vady andefimandriny
Nindaosin’ny fahafatesana ny Alakamisy lasa teo Rtoa Volahanta Cohen, vady andefimandrin’i Cohen Bera, filoha mpanorina ny finoana Jodaisma Madagasikara Mesirima eto Madagasikara.
Fiangonana Anglikanina Ambanidia Hiatrika ny fetin’ny taranaka ny 3 novambra izao
Toy ny fanaony isan-taona dia hanamarika ny fetin’ny taranaka indray ny fiangonana anglikanina (EEM) Ambanidia ny alahady 03 novambra 2019 izao.
Fotoan-dehibe ho an’ny fiangonana FJKM nentina nitondrana am-bavaka ny taona 2019 omaly 20 janoary. Mpino marobe no namaly ny antso sy nandray ny hafatra sy fampaherezana avy amin’ny filohan’ny FJKM Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi.
Nivoitra tao ny fitoriana amin’ny Kristianina hijoro ho vavolombelon’i Kristy ka endrika roa no isehoany dia amin’ny fahamarinana sy amin’ny fitiavana. Notsiahiviny ny voalazan’ny ohabolana 14:34: “Ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena”. Any amin’ny toerana misy ny FJKM dia ataovy hita eo ny fahamarinana. Aza atakalo vola na fahefana na voninahitra ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny tompo mpitsara anao, hoy izy. Faharoa dia ny hoe : Vavolombelon’i Kristy amin’ny fitiavana. Manolona ny zava-misy teo amin’ny tontolo politika sy ny fiainam-pirenena tao anatin’ny roa volana, dia nampahatsiahy ny tokony hisaorana amin’ny zava-drehetra izy fa izany no sitrapon’Andriamanitra. “Misaora an’Andrianamanitra amin’ny zavatra nahafaly anao, ary misaora an’Andriamanitra amin’ny zavatra nandiso fanantenana anao”, hoy ny teny fampaherezana. Nampahatsiahy ny toritenin’ny Pasitera mainty hoditra Amerikanina dia ny Pasitera Martin Luther King izy, dia ny hoe: tokony hampitombointsika sy hokolokointsika ny fahaizana mamela heloka. Izay tsy manana hery hoentina mamela heloka dia tsy manana hery hoentina mitia. Mahaiza mamela heloka eo amin'ny samy kristianina. Aza avela hiteraka fanavakavahana eo amintsika ny loko politika. Sarobidy lavitra noho ny loko politika ny batisa ho antsika Kristiana FJKM, hoy ny Filohan’ny FJKM. Nambarany teny Mahamasina omaly, ny tsy maintsy hovitaina ny fanorenana fiangonana FJKM amin'ireo kaominina 407, hoy ny filohan'ny FJKM Irako Andriamahazosoa Ammi, ka ivelomy tsara ny fiombonana, amin’ny fanatrarana ny vina : "vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara", hoy ny hafatra lehibe. Nanotrona ny fotoam-bavaka ny filoha teo aloha mirahalahy Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina, izay zanaky ny FJKM.